Sumo uye zvakanakira sofa yemagetsi – Baotian fanicha Co, Ltd.
Chigaro chejecha remagetsi chine mabhatani akasiyana. Iwo kumusoro uye ezasi mabhatani pane bhatani anogona kudzora kumusoro nekudzika kweshure kwesofa. Nekugadziriswa kwesofa remagetsi, chinzvimbo chemunhu pamutsago chinoshandukawo, seye kumashure. Dzimwe nguva, vanhu vanofambisa chiuno kumashure, uye zvinopesana. Kana iwe uchishuva kuve neyako pls taura nesu- a Sofa mubhedha mugadziri.
Iyo "mashiripiti" yemagetsi chair yemasofa ndiyo iyo kana wakagara, musana wakasimudzwa, uye hapana chikonzero chekuwedzera a chitsiko chetsoka kumberi, uye tsoka dzinogona kudonha zvakasikwa kana kuiswa mubath tsoka. Kana iwe uchida tsoka yetsoka, unogona kushandisa bhatani rekutonga kuti umuke zvakasununguka. Kunyangwe chimiro chiri chakaomarara kupfuura cheya chetsika, mashandiro acho akatendeka uye giredhi rakakwira.
Zvakanakira sofa yemagetsi:
1. Iyo sofa yemagetsi ine simba rekudzora kumanikidza. Sofa chair iri nyoro uye kumanikidza kwomuviri wemunhu kudiki, saka zvinonyanya kusununguka kugara pasofa chair;
2. Sofa remagetsi rine basa rekukwiza muviri. Kana munhu akagara pa sofa yemakona yemazuva ano uye inoita chiitiko chidiki, zvinokonzeresa kudedera kudiki kwematsime uye zvakapfava zvinhu. Muviri wemunhu unoiswa pasimba reelastic rekuchinja kwe periodic, izvo zvinogona kutamba chinzvimbo chekukwiza muviri.
3. Iyo sofa yemagetsi inochinja. Iwo mutsindo wesofa wakagadzirwa nezvinhu zvakapfava senge rineni, bhurawuni, chipanji, nezvimwewo. Kune matsime akati wandei pasi payo, izvo zviri zviviri zvakapfava uye zvakapfava.
Matagi: Tenga sofa yakaiswa, Sofa yemagetsi
Nguva yekutumira: 2020-08-01